I-Witsend Country Cottage - I-Airbnb
I-Witsend Country Cottage
Strzelecki, Victoria, Australia
Indlu esemaphandleni yonke sinombuki zindwendwe onguHeather
Ifumaneka kumgama nje omfutshane onesiqingatha sokuqhuba usuka eMelbourne, iWits End Country Cottage ibekwe phakathi kweenduli ezisembindini weStrzelecki Ranges. Indlwana yethu ezimeleyo ngokupheleleyo ibekwe kakuhle ineembono ezijonge iinduli zaseGippsland.
Le ndlu ineefenitshala zala maxesha, i-spa ephindwe kabini, ibhedi yobukhulu bukakumkanikazi, iTV yescreen esisicaba esinenkqubo yethiyetha yasekhaya, ikhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo, i-BBQ yabucala, indawo yokuhlamba impahla kunye nomjikelo womoya wokubuyela umva. Hlala emva kwaye uphumle kubutofotofo bendawo yakho yabucala kunye nepholileyo yokubuyela eWits End Country Cottage.
I-cottage iyilwe njengesibini sokubuyela umva, sinegumbi lokulala elikhulu elinendawo enkulu kunye nebhedi yokumkanikazi kodwa inokwamkela iindwendwe ezi-1-2 ezongezelelweyo kubukhulu bokumkanikazi ukukhupha isofa kwigumbi lokuphumla. Umrhumo we-25 yeedola ngomntu ngamnye, ubusuku ngabunye uhlawulelwa iindwendwe ezongezelelweyo.
4.92 · Izimvo eziyi-124
Bonisa iingxelo zokuhlola eziyi124
I-Witsend Country Cottage kukumgama nje omfutshane wemizuzu eli-15 ukusuka eKorumburra eneendawo zokutyela ezahlukeneyo zeBoutique ezifana neVenkile yeSebe leBrough kunye neBurra Brewing Co (ipizza enkulu yomlilo weenkuni!) kunye noDivas Tandoori Indian ukubala abambalwa. Kukwakho nevenkile enkulu ye-IGA egcweleyo kunye nelayisensi.
Mganyana ezantsi kwenduli eWarragul uya kufumana uluhlu olukhulu lokhetho olunje ngePepe's Pizza, iHoggett Kitchen, iWarragul Thai kunye neCourthouse zonke ziindawo ozithandayo kunye neendawo zokutyela ezintle.
I-West kunye ne-South Gippsland ikwabonelela ngezinto ezininzi ezinomtsalane ezifana neemarike zamafama, ii-wineries kunye ne-breweries. Ezinye zezinto eziphambili ziquka:
IMakethe yaseKongwak (Rhoqo ngeLanga 9 - 12.30ish) yintengiso eyaziwayo yakudala kunye nokuqokelela.
ILoch Village yindawo yabakhenkethi yalapha ekhaya eqhayisa ngekhefi edumileyo kunye nevenkile yokutya, iOlive kunye neGippsland Wine Company kunye neLoch Brewery & Gin Distillery.
I-Yarragon Village yindawo eyaziwayo yabakhenkethi eneendawo zokutyela ezininzi, iigalari kunye neevenkile ezinokujongwa kubandakanya izinto zakudala ezidumileyo kunye nentengiso yokuqokelela.
I-Koonwarra Food & Wine Store ibonelela ngokutya okumnandi kunye nokhetho oluthandekayo lwewayini.
I-Meeniyan ikwayindawo ethandekayo yokutyelela kunye ne-Moo's cafe kunye ne-Trulli Woodfire Pizzeria. I-Meeniyan nayo inegalari ethandekayo kunye neevenkile ezimnandi zezipho.
Ivenkile yokutya kunye neWayini ye-Kernot sisipho esipheleleyo. Iipizza ezimnandi, iwayini zalapha ekhaya kunye nomculo ngeempelaveki.
Umbuki zindwendwe ngu- Heather
I cant live without my pets that is why I don't mind people bringing their fur babies with them.
I-cottage iqulathe ngokupheleleyo kwaye siyayihlonipha imfihlo yakho nangona siyafumaneka kwisiza okanye ngefowuni ukuba ufuna naluphi na uncedo. Sikwavuya kakhulu ukuncedisa ngolwazi malunga nezinto ezikhangayo zendawo kunye neendawo ezinomdla ezibandakanya ii-wineries, ukuhamba, iindawo zokutyela, iigalari zobugcisa kunye nokunye okuninzi.
I-cottage iqulathe ngokupheleleyo kwaye siyayihlonipha imfihlo yakho nangona siyafumaneka kwisiza okanye ngefowuni ukuba ufuna naluphi na uncedo. Sikwavuya kakhulu ukuncedisa ngolw…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Strzelecki